သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ဖန်တီးခြင်း — Seadstem – Southeast Asian Digital
ဖန်တီးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရမှာ ပြဿနာတွေအတွက် အဖြေများကို ရှာဖွေဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပေမယ့် ဇီဝဗေဒတွင် ပြဿနာအများစုကို ဆင့်ကဲဖြစ်ပွားခြင်းမှတဆင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအရည်တွေ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ဘယ်လိုစီးဆင်းနေလဲဆိုတာ နားလည်နိုင်မယ်၊ ၎င်းတို့ တည်ဆောက်ပုံတွေ၊ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို နားလည်လာနိုင်ပါမယ်။
နမူနာပုံစံငယ်တွေမှာ ကန့်သတ်ချက်များပါရှိပြီး သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အစစ်လို ထပ်တူမကျနိုင်ပါ။ ဒီစမ်းသပ်ချက်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပုံစံငယ်များကို လေ့လာပြီး သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အစစ်နဲ့ ဆက်စပ်တွေးတောနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါတို့သည် ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသုံးများသော ဒီဇိုင်းဗျူဟာများဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်တီးခြင်းဆိုတာ ရူပဗေဒတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ ဘဝသိပ္ပံရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီး ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ဖန်တီးစမ်းသပ်ရင်း ဘယ်လိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် သွေးတွေက လည်ပတ်ဖို့လိုတာလဲ?
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက San Jose, CA မှာရှိတဲ့ Tech Museum ရဲ့ ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်ပွဲ “Pump it Up!” ကိုမှီငြမ်းထားပါတယ်။ Moyer, Richard, and Susan Everett. Everyday Engineering: Putting the E in STEM Teaching and Learning. Arlington: NSTA Press, 2012. သင့်ရဲ့သိပ္ပံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို မြှင့်တင်ဖို့နည်းလမ်းများစွာကို ဤစာအုပ်တွင်သရုပ်ဖော်ပြထားတယ်။ Allison, Linda. Blood and Guts. Boston: Little, Brown, 1976. ဒီစာအုပ်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါတွေနှင့် ၎င်းတို့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကြောင်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ရှင်းပြထားပြီး ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ လူ့ခန္တာကိုယ်အကြောင်း ပိုနားလည်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။. Exploratorium Teacher Institute https://www.exploratorium.edu/snacks/re-engineering-circulatory-system